दुई पटकको टेलिफोन वार्तामा के कुरा भयो ओली र स्वराजबीच ? « Mazzako Online
दुई पटकको टेलिफोन वार्तामा के कुरा भयो ओली र स्वराजबीच ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच हिजो र आज दुई दिन लगातार टेलिफोन वार्ता भएको छ । वार्ता पछि आन्दोलनरत दलसँग सहमतिको संभावना बढेको नेताहरुले बताएका छन् । संसदमा रहेका संशोधन पारित गर्ने र तीन महिनामा सीमांकन टुंग्याउने रोडम्याप बनेको उनीहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीका अनुसार नेपाल र भारतबीच देखिएको विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजबीच लगातार फोन वार्ता भएको हो । बुधबार उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापासँग दिल्लीमा छलफल गरेलगत्तै उनले प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरेकी हुन् ।
स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्रीले दिएको सन्देश र समाधानको बाटोबारेमा उनले प्रधानमन्त्री स्तरबाट बुझ्नको लागि टेलिफोन गरेकी हुन् । उक्त बैठक सकारात्मक भएपछि उनले बिहीबार पनि टेलिफोन गरेर समस्या समाधानको बाटोमा लाग्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
प्रमुख तीन दलको बैठक जारी रहेको अवस्थामा बिहीबार अपरान्ह टेलिफोन संवाद भएको थियो । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले राखेका मागलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गरेर अहिलेको असहज अवस्थालाई छिटै अन्त्य गर्नेमा भारत सहमत भएपछि परिस्थिती सहजतातर्फ गएको प्रधानमन्त्री निकटस्थले बताए । स्वराजसँगको यो संवादपछि मधेसी मोर्चासँग निर्णायक वार्ता हुने र आपूर्तिमा भइरहेको अवरोध छिटै हट्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सीमांकनको विषयलाई एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने, जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण तथा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका मुद्दालाई पनि क्रमशस् समाधान गर्ने विषयमा स्वराजसँग छलफल गरेको बताइएको छ । उनले राजनीतिक दलहरुको सम्मतिमा त्यस्तो प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको पनि अधिकारीहरुले बताए ।टेलिफोन संवादपछि प्रधानमन्त्रीले केही निकटस्थसँग परिस्थिती सहज अवस्थामा जाने बताएको एक नेताले जानकारी दिए ।
नाटकीय ढंगले लगाइएको नाकाबन्दी नाटकीय ढंगले नै खुल्छ
यसैबीच उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नाटकीय ढंगबाट सुरु भएको नाकाबन्दी सोही अनुसार अन्त्य हुने बताएका छन् । धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन भारत गएका उपप्रधानमन्त्री थापाले दिल्लीमा भएको राजनीतिक भेटघाटपछि नाकाबन्दी खुल्ने संकेत मिलेको उल्लेख गरे ।
भ्रमणबाट बिहिवार अपरान्ह स्वदेश फर्केका थापाले आफूले भारतीय नेता तथा समकक्षीसँग गरेको भेटमा नाकाबन्दी खुल्ने संकेत मिलेको जानकारी दिए । त्रिभुवन विमानस्थलबाट सोझै धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालय पुगेका थापाले जुन ढंगले भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो त्यही ढंगले खुल्ने बताए । उनले भने, ‘नाटकीय ढंगले लगाइएको नाकाबन्दी नाटकीय ढंगले नै खुल्छ ।’
भारतको अघोषित नकाबन्दी खुल्ने संकेत मिलेपनि अहिले नै हौसीहाल्ने अवस्था भने नरहेको उनको भनाई थियो । भारतले यसअघि पनि पटकपटक नाका खुल्छ भनेपनि नखोलेको स्मरण गर्दै थापाले भने, ‘हामीले उनीहरुको काम हेरेपछि मात्रै भन्न सक्छौं । अहिले नै भारतको कुरा पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन ।’